ပွဲစဉ်ခန့်မှန်း 100 သေချာ , Bet tips and Football statistics
+7/ 9584-983-763info@ဒါကြောင့်cceRBet ကိုshoot.cအဆိုပါm
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ: နိုဝင်ဘာ 10 2017 | နောက်ဆုံးအပေါ် updated 8 နိုဝင်ဘာလ 2017 တွင် 21:39 GMT +2| ပွဲစဉ်ခန့်မှန်း 100 သေချာ | Viewed 2323 ကြိမ်.
ပွဲစဉ်ခန့်မှန်း 100 သေချာ
ဆွီဒင်သူတို့ထဲသို့ဝင်ထားသောခေတ်သစ်စဉ်းစားနေတဲ့စိတ်ကူးအုပ်စုအဆင့်ခံစားခဲ့ကြ, ပွဲစဉ်ခန့်မှန်း 100 အမျိုးသားအသင်းထဲကအီဘရာနဲ့အတူသေချာ. ရုတ်တရက်, ဆွီဒင်တစ်ခက်အလုပ်လုပ်ယူနစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ကဒုတိယနေရာအတွက်ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးအတော်လေးခက်ခဲတဲ့အုပ်စုတွင်ပြင်သစ်နောက်ကွယ်မှ. အီတလီကမ္ဘာ့ဖလား၌မိမိတို့နေရာအရပ်ဘို့စစ်တိုက်ရပါလိမ့်မယ်, နှင့်၎င်းတို့၏ဘက်မှာအကြီးအကျယ်မျှော်လင့်အတူဆွီဒင်နှင့်အတူဤနှစ်ဆအစည်းအဝေးထဲသို့ဝင်. ကမ္ဘာ့ဖလားအီတလီနိုင်ငံမရှိဘဲတူညီသောမဟုတ်ပါဘူး, မှန်သော?
ပထမဦးစွာ, ကျွန်တော်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အတူနှစ်သင်းရှိ, နှင့်တကယ်တော့သူတို့တရားကိုဟောပြောဘောလုံး၏အဘယ်အရာကို type ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်ဆင်တူ. ပထမဦးဆုံးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး, သေချာဘောလုံးခန့်မှန်း play on the result, အန္တရာယ်များကို minimize, အသကျရှငျဒုတိယတိုက်ပွဲဖြစ်စောင့်ရှောက်. သူများသည်နှစ်ခုကိုစည်းကမ်းနှင့်စနစ်တကျအသင်းများကနေဒီပွဲစဉ်များအတွက်အခြို့သော Key ကိုစကား. ရှေ့မတွင်, ပိုတစ်ခုအမှန်တကယ်ဘောလုံးပွဲထက်စစ်တုရင်ဂိမ်းနဲ့တူခံစားရနိုင်ပါတယ်.
The truth is thatadraw would be an accetable Sure predictions of မှန်ကန်သောအလောင်းအစားအကြံပေးချက်များ outcome for both teams. ဆွီဒင်ဘာမှပေမယ့်ဆုံးရှုံးမှုယူမယ်လို့, ဆဲတစ်ဝေးရည်မှန်းချက် clinch ဖို့မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူအီတလီနိုင်ငံမှသွားလာနိုင်တော့မည်. အီတလီနိုင်ငံကိုလည်းသရေကျယူမယ်လို့, သူတို့အိမ်မှာကဖြေရှင်းပေးဖို့ယုံကြည်မှုပေါ်လာအဖြစ်. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, 0-0 သို့မဟုတ် 1-1 တစ်ဖက်တစ်ချက်အဘို့အကျော်ဂိမ်းမဟုတ်ပါ. ဆွီဒင်သစ်ကိုဦးခေါင်းနည်းပြအဖြစ်ယန္နေ Andersson နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲဝင်ကြ၏, ယခင်နည်းပြအဖြစ်, Erik Hamren မရှိတော့ပြည်တွင်းဘောလုံးအသင်းအဖွဲ့များ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ခဲ့ပါ. Andersson gudiance စဉ်အတွင်း, ဆွီဒင်အလွန်ကောင်းစွာအခြေအနေကောပါပြီ, ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်ကွာတဦးတည်းယူကျုံးစွမ်းဆောင်ရည် မှလွဲ..
အိမ်မှာ, သူတို့အန္တရာယ်ကြည့်, လက်မှတ်ဘောလုံးခန့်မှန်း ခိုင်မာသော, ထိုးစစ်နှင့်ဖန်တီးမှု – အများအားဖြင့်ဘွန်ဒစ်လီဂါကြယ်ပွင့်ကနေ, ဘွန်ဒစ်လီဂါအတွက်နောက်ဆုံးရာသီအများဆုံးကူညီပေးနေထောက်ပံ့ပေးသူကို Emil Forsberg. သူငယ်ချင်းများ Arena မှာ, ဆွီဒင်သို့ သွား. 4-1-0 နှင့် 18-2 ရည်မှန်းချက်ခြားနားချက်အတွက်. သာ2ငါးအိမ်မှာမီးခြစ်ထဲမှာဂိုးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်, ပြင်သစ်နှင့်နယ်သာလန်ကိုကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အတူ. ဖြည်းဖြည်းချင်း, ပင်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများကယ့်ကိုဒီကိုယုံကြည်ဖို့စတင်ခဲ့ပါပြီ “အသစ်က” အမျိုးသားရေးအသင်း.
ရှေ့တက်, အဆိုပါဆွီဒင်နိုင်ငံသားဟောင်းဂရိလိဂ်ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းထံမှတသမတ်တည်းထုတ်လုပ်မှုရရှိထား, Marcus Berg ကနှင့်အတူ 8 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် (5ဥရောပအကောင်းဆုံးကြိမ်မြောက်).
အီတလီနိုင်ငံငါးမှတ်ပြီးဆုံး ဘောလုံးလောင်းကစားအကြံပေးချက်များ behind Spain inadominant group by the two giants. အီတလီကသူတို့နှင့်အတူလမ်းမပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာကစား 4-0-1 စံချိန်, သာစပိန်မှဆုံးရှုံး. သူတို့ကယခုအချိန်တွင်အသင်းအတွက်အရည်အသွေးနှင့်ကမ္ဘာကြီးကိုဘောလုံးအတွက်ဖြစ်ကောင်းအန္တရာယ်အရှိဆုံးတိုက်စစ်မှူးတစ်တစ်တန်ရှိ, Ciro ရွေ့အတွက်. သူသည်နောက်ကျကြံ့ခိုင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ထားပြီးပေမယ့် Giampiero Venturas ဘက်များအတွက်ကစားသမားအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်ဖြစ်ပါတယ်.
Traditonally ဤအသင်းများကအရမ်းနီးကပ်ပွဲကစားခဲ့ကြ, မကြာခဏတဦးတည်းရည်မှန်းချက်ခြားနားချက်တွေ့ဆုံ, နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မဟုတ်မဆိုရည်မှန်းချက် galores. သငျသညျရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုတွေ့မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ဒီစောင့်ကြည့်ဖို့မှားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ငါဖြောင့်သရေကျကစားအထွေထွေအများပြည်သူအားဖြင့် fancied မဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသတိထားမိပါတယ်, အစဉ်အမြဲတဦးတည်းဘေးထွက်ကောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရသူကို, အမှတ်သောအရာကိုထိုင်ဘယ်သူမှအနိုင်ရရှိတဲ့မဲနှိုက်များအတွက်မျှော်လင့်သောကွောငျ့? စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ – ဤသည်ကြီးမားသောအရေးပါမှုနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပထမဦးဆုံးအဓိကစည်းမျဉ်းသည်အဘယ်မှာရှိနှင့်နေတဲ့ဂိမ်း, နှစ်ခုကာကွယ်ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့များအကြား. အမှားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းစာရွက်စောင့်ရှောက်နှစ်ဦးစလုံးသင်း၏စိတျ၌တည်ရှိ၏ – ငါတကယ်မဲနှိုက်များအတွက်ခံစားမိ, နှင့်ငါ့ထံမှတစ်ဦးအလတ်စားရှယ်ယာရရှိမည်.
တတ်နိုင်အကြံပေးချက်များစျေးနှုန်းများသုတေသန Bettingဘောလုံးရမှတ်များအခမဲ့ကစားနည်းလောင်းကစားကနေငွေရှာဖို့ဘယ်လိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားဘီဘာအိုကမ်းလှမ်းမှုအထူးပွဲသေချာတာပေါ့အလောင်းအစားခန့်မှန်း site ကိုဦးဝင်းကစားနည်း
ဂရိနိုင်ငံ vs ခရိုအေးရှား
Empoli vs Pro ကို Vercelli